Ukubukeka umjuluko - inqubo ngenakugwemeka. Ixhumeke nabalawuli zomzimba womuntu. Ukusetshenziswa deodorants kungaba ingxenye ukuvimba le nqubo, Nokho ezingemnandi umjuluko amabala asavela izingubo zethu. Ziyakwazi kwaphawuleka ngokukhethekile kwimikhiqizo ezimhlophe, ukuzigeza ngezinye izikhathi kubonakala kungenakwenzeka, futhi ahlukane into ozithandayo sorry. Okufanele ukwenze kuleli cala? Indlela ukuqeda ophuzi amabala ngaphansi emakhwapheni? Kungenzeka yini ukulondoloza ozithandayo ihembe ngokurhaba izindlela zakho?
Hydrogen peroxide - impendulo enhle kakhulu lo mbuzo: "ukuze kanjani ukuhlukana ophuzi amabala ngaphansi emakhwapheni?" Indawo kufanele ibe Sula ngokucophelela indwangu kuyidambise necebo amaphesenti amathathu-peroxide ke uxubha futhi hang ukuze ome umkhiqizo elangeni eliza ngqo.
Ama-aspirin futhi umsizi wethu ekulweni amabala kusukela umjuluko. Izithandani amaphilisi adingekayo ukuchoboza chaza emanzini afudumele (uhhafu ngokwanele ingilazi). Indawo kufanele ibe manzi ngokuphelele ikhambi okuholela futhi ushiye i kwamahora ambalwa, bese ugeza e powder evamile.
Inhlanganisela ammonia ne-sodium chloride unika imiphumela emihle, uma ufuna ukuchitha phezu underarm mhlophe izingubo ke ichithekile. Ukuze wenze lokhu, a isipuni sikasawoti ziyoncibilika emanzini, wengeza amaconsi ambalwa ammonia, ikhambi okuholela Sula ibala futhi ushiye amahora ambalwa.
Indlela ukuqeda amabala yellow ngaphansi emakhwapheni, uma nigqoke kasilika esibucayi? Ngendlela ephephile - ikhambi abavamile ithebula usawoti. Kumele agqoke ophuzi kwesigaba futhi ushiye entweni ihora noma amabili. Khona-ke uxubha kahle kahle ukugeza.
Woollens singageza off umjuluko usebenzisa isixazululo insipho. Ukuze wenze lokhu, ngomusa ukukuthinta ibala nge isixazululo ke uxubha umkhiqizo.
Nokho, izincomo elula ukuqeda amabala ngaphansi emakhwapheni, lokhu okulandelayo: endaweni okuholela kumele wageza off ngokushesha ngangokunokwenzeka, kulesi simo, kungaba ukuphatha ngisho elula yokuwasha. Futhi lo mthetho usebenza kubo bonke izinhlobo izindwangu, ngaphandle kokukhetha. Amanga engasekho ezingcolile nelineni ihembe elimhlophe namabala yellow, lo nzima kuyoba ke inqubo mhlophe. Ngaphezu kwalokho, amathuba okuvela kuyo izindawo zingancishiswa ngu ngendlela elula:
Ngaphansi ihembe ezibizayo noma ihembe kungenziwa igqoke ihembe elula nge imikhono esifushane, ngaleyo ndlela kuncishiswe ingozi yellowing edabukisayo.
Ngemuva kokufaka isicelo isiqedaphunga kufanele ulinde amaminithi ambalwa ukuze ome kahle, bese sigqoka izingubo.
Nokho, zikhona izikhathi lapho imbangela ibala kuwukweqisa ukujuluka emakhwapheni. Ukwelashwa yalesi sifo ezingemnandi (hyperhidrosis) kuncike izizathu nokukubangela. Ngakho, isizathu esenza ukuthuthukiswa hyperhidrosis kungaba isifo endocrine, isifo sezinso, esimiso senhliziyo nemithambo yegazi, izimila, izifo ezithathelwanayo nokuphelelwa abanye ahlukahlukene. Kulokhu, akumelwe bahlanganyele ucinge impendulo yombuzo kanjani ukuqeda amabala yellow ngaphansi emakhwapheni, kanye nekusungulwa izimbangela ukujuluka ngokweqile kweqiniso. Indinganiso luhlolo emitholampilo nge isethi ephelele ukulethwa cwaningo ngokuvamile okwanele ukunquma izimbangela ngeziphambeko.